करिश्माका कारण बाबुरामको नयाँ शक्तिमा अर्काे बबण्डर ! - Enepalese.com
करिश्माका कारण बाबुरामको नयाँ शक्तिमा अर्काे बबण्डर !
इनेप्लिज २०७२ माघ १७ गते ०:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १६ माघ । एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति अभियान घोषणा गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थप तनावमा परेका छन् । बाबुराम नयाँ शक्ति राष्ट्रिय परिषद सदस्य एवं नायिका करिश्मा मानन्धरका कारण तनावमा परेका हुन् । परिषदका संयोजक समेत रहेका बाबुरामले करिश्मालाई सुरुमै राष्ट्रिय सदस्य बनाएपछि एमाओवादी छाडेर आएका अन्य नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । साथ दिन आएका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि नयाँ शक्ति अभियानमा बबण्डर मच्चिएको छ । नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेकी नायिका करिश्मा मानन्धरबाट सदस्यता लिनुपर्ने भएपछि पूर्व एमाओवादीहरु अचम्ममा परेका छन् । आफूभन्दा जुनियर करिश्माको हातबाट सदस्यता लिने विषयमा नयाँ शक्तिमा बबण्डर मच्चिएको हो । यसलाई मिलाउन बाबुरामलाई समेत हम्मे हम्मे परेको असन्तुष्ट एक नेता बताए । आफूलाई सहयोग गर्नेहरुले नै असन्तुष्टि जनाएपछि बाबुरामले सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरु पहिलो लटमा माग भएको र २६५ पुग्दा पूर्व लडाकुहरु समेटिदै जाने भनेर फकाएका छन् । यसैगरी नयाँ शक्तिमा विलय भएको भनिएको नेपा पार्टीभित्र भने विभाजन हुने अवस्था पैदा भएको स्रोतको दाबी छ । नयाँ सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी पुरै विलय भइसकेको छ तर, नेपा भित्र भने अध्यक्ष डा.केशवमान श्रेष्ठ गएपनि आफूहरु पार्टी नै चलाएर बस्ने अड्डी केही नेताले कसेका छन् । श्रेष्ठले समावेशीताको मुद्धा राम्ररी नउठाएको समावेशीताको मुद्धा उठाउन नेपा पार्टी आवश्यक भएको भन्दै उनीहरुले पार्टीलाई विलय हुन नदिने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । भर्खरै सार्वजनिक बाबुरामको नयाँ शक्तिको ३५ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषदमा एमाओवादी छाडेर आएका कैयौ चर्चित नेताको नाम छुटेको थियो ।